85 Zebula (12 Izivakashi) - Bela Bela - South Africa - I-Airbnb
85 Zebula (12 Izivakashi) - Bela Bela - South Africa
Bosveld, Limpopo, iNingizimu Afrika
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Hanchen
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Sep 24.
I-85 Zebula Golf Estate and Spa iyindlu yamaholide yokuziphekela etholakala endaweni ekahle yeZebula Golf Estate and Spa. IZebula ihlinzeka ngendawo yegalofu esezingeni le-5 Star, indawo yokulondoloza imvelo, nendawo yezempilo, ebekwe endaweni engamahektha ayi-1600 e-African bushveld ethunzini leNtaba i-Waterberg.
Le ndlu kanokusho eziphekela ikwazi ukuhlalisa izivakashi ezingafika kwezi-12 (abadala abayizi-8 izingane ezi-4) futhi inamagumbi okulala ayi-4 ane-air-conditioned en-suite. Inendawo yokuzijabulisa ecashile, i-lapa, isigodi, i-jacuzzi kanye nedamu lokubhukuda
Le ndlu kanokusho yokuziphekela ingahlala izivakashi ezingafika kwezi-12, futhi inamagumbi okulala ayi-4 ane-air-conditioned en-suite. Amakamelo amabili anemibhede elingana nendlovukazi kanti amanye angu-2 anemibhede engamawele. Amakamelo amabili aphezulu ngalinye linendawo ephakemeyo enombhede ongu-3/4 obhekelela izingane njengoba zidinga ukugibela iladi. Ngakho-ke abantu abadala abayi-8 nezingane ezi-4 ezingaphansi kweminyaka eyi-10.
Ikhishi likuhlomele ngokuphelele ukuziphekela nazo zonke izinto ezisetshenziswayo, isitofu nohhavini, isiqandisi-siqandisi, umshini wokuwasha, umshini wokuwasha, i-microwave, namabhodwe namapani. Ikhishi, indawo yokudlela kanye nendawo yokuphumula iyipulani elivulekile elinendawo yomlilo ezinhlangothi zombili phakathi negumbi ukuze kube nobusuku obuntofontofo obuzungeze indawo yomlilo. Indawo yokuphumula inamagumbi okuphumula esikhumba anethezekile ne-flatscreen TV ne-DSTV. Igumbi lokudlela lisebenzisa izivakashi eziyi-10. Indawo yokuphumula iphumela endaweni yokuzijabulisa ecashile enefenisha yokhuni ngaphandle kwegceke kanye ne-braai eyakhelwe ngaphakathi, i-weber braai kanye nedamu lokubhukuda elinenethi yokuphepha. Ukusuka lapha ungajabulela umkhathizwe ovulekile nokuphuma kwawo kwelanga okumangalisayo. Phezulu phezulu uzothola igumbi lokubhukuda elinendawo yomlilo ekhukhuleka iye kuvulandi ongaphandle enefenisha yangaphandle eziqhayisa nge-jacuzzi ebabazayo kanye nombono omangalisayo phezu komgodi we-13. Ngakwesokudla sendlu sine-lapa yotshani ebabazekayo enendawo yokucima umlilo, elungele i-potjie, ibha eyakhelwe ngaphakathi kanye nefenisha yokudlela yangaphandle. Uma uzizwa njengobusuku ngaphansi kwesibhakabhaka sethu esimangalisayo esigcwele izinkanyezi eduze komlilo ovuthayo, kukhona isigodi esinendawo yokucima umlilo ukuze ujabulele ukukhanya kwenyanga. Kukhona indawo yokupaka izimoto ezi-4. Ukuhlanza kufakiwe ngaphandle kwamaholide kanye noLwesithathu.
ubusuku obungu-7 e- Bosveld
Sep 29, 2022 - Oct 6, 2022
4.55 · 33 okushiwo abanye
Ziningi izinto ezenzeka kwaZebula. Okukhanga kakhulu amadoda kudlala igalofu kanti kwabesifazane i-spa.I-clubhouse izishaya isifuba ngendawo yokudlela enhle yalezo zinsuku zokuphumula zobuvila ongafuni ukuzenzela zona.Kukhona isitolo esincane lapho ungathenga khona igilosa eswele kanye nezikhumbuzo. Ezinganeni kune-zoo encane ene-caracal, ama-meerkats, izingwenya, nezinyoka ezinkulu kakhulu.Ngezimpelasonto bangaxhumana nabo futhi bangaphinde bahambe bayobheka ukuthi ingulule igijima kanjani.Bese kuba khona ukugibela amahhashi, i-quad-biking, ukucibishela imicibisholo, ukudoba nemfundo yezilwane zasendle kanye nokugibela imidlalo. Kukhona indawo yokuzivocavoca ehlome ngokuphelele, idamu lokubhukuda elikhulu, inkundla ye-squash, inkundla yethenisi, i-jumping castle kanye nejimu yasehlathini eduze kwe-clubhouse ongayisebenzisa.
Izindlovu zingaphandle nje kweZebula ngaphesheya komgwaqo lapho ungakwazi khona ukuxhumana, ukubhukuda, ukugibela futhi uziphakele.Lonke ulwazi mayelana nezinto ezenzeka eZebula nasezindaweni ezizungezile zitholakala esitodlwaneni yi-clubhouse.
Hlola ezinye izinketho ezise- Bosveld namaphethelo